I-Southwest Airlines: Siya kuyichasa iTexas yokuvalwa kwegunya lokugonya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Southwest Airlines: Siya kuyichasa iTexas yokuvalwa kwegunya lokugonya
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Amalungelo abantu • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Umphathi we-Southwest: Asizukuvuma ukuthintelwa kweTexas kwigunya lokugonya
UGary Kelly: “Sikhuthaza bonke abasebenzi bethu ukuba bagonywe. Ukuba abakwazi, siyabakhuthaza ukuba bafune indawo yokuhlala, nokuba kungenxa yezonyango okanye inkolo. ”
Ugunyaziso lokugonyelwa kweSouthwest Airlines COVID-19 lwalunonxibelelwano “olungenanto” ekucinyweni kwenqwelomoya ngeempelaveki.
Injongo yesigunyaziso sokugonywa yi-Southwest Airlines kukuphucula impilo kunye nokhuseleko, hayi ukuba abantu baphulukane nemisebenzi.
I-Southwest Airlines izinze eDallas, eTexas kwaye inokujongana nempendulo enzima ngokuchasa i-state executive order.
Umphathi we-Southwest Airlines u-Gary Kelly, namhlanje, uthembise ukungahambisani ne-Texas kwi-COVID-19 yegunya lokugonya.
Umlawuli omtsha wase-Texas u-Greg Abbott uyalela iinkampani zabucala ekufuneni ugonyo lwe-COVID-19 kubasebenzi.
Ngexesha lodliwanondlebe lwangoLwesibini, uKelly wanyanzelisa ukuba Southwest Airlines Igunya lokugonya le-COVID-19 lalinonxibelelwano olungu "zero" kumawaka kurhoxiso lwenqwelomoya kule mpelaveki kunye netyala lomanyano ngokuchasene nenkampani, kwaye nenqwelomoya "ayinangxaki" nabasebenzi bayo.
“Sikhuthaza bonke abasebenzi bethu ukuba bagonywe. Ukuba abanako, siyabakhuthaza ukuba bafune indawo yokuhlala, nokuba kungokwezonyango okanye inkolo, kodwa injongo yam ngokucacileyo kukuba akukho mntu uphulukana nomsebenzi, ”utshilo uKelly, echaza ukuba injongo yegunya lokugonya leSouthwest Airlines "Ukuphucula impilo nokhuseleko, hayi ukuba abantu baphulukane nemisebenzi."
“Ewe, sinezimvo ezomeleleyo ngalo mbandela, kodwa ayisiyiyo leyo ibinengxaki Southwest Airlines Ngempelaveki, ”uqhubeke, ebhekisa ekucinyweni kwendiza kunye nokulibaziseka. Endaweni yoko, u-CEO ubonakala ephindwe kabini etyhola abasebenzi bokulawula ukugcwala komoya kunye nemozulu eFlorida, kwaye ngokungathandabuzekiyo kubhekiswa "kukungabikho emsebenzini" njengomnye wemicimbi abayijongayo.
UKelly ukwathe ngolwe-Lwesibini ukuba "ebengazange avume kwimibutho enyanzelisa" igunya lokugonya, kodwa wathi "umthetho olawulayo ovela kuMongameli Biden ugunyazisa ukuba bonke abasebenzi baseburhulumenteni" kunye "nabo bonke oonokontraka bemanyano" - ngokombono wakhe, zonke iinqwelo-moya ezinkulu ”- kufuneka ziphumeze ugonyo olunyanzelekileyo nge-8 kaDisemba.
Ngokufunga ngokuqhubekeka negunya lokugonya, nangona kunjalo, iiSouthwest Airlines zibonakala ngathi ziyawuthobela umthetho olawulayo okhutshwe ngu Irhuluneli yaseTexas uGreg Abbott ngoMvulo othintela iinkampani zabucala ekufuneni ugonyo lwe-COVID-19 kubasebenzi.
Southwest Airlines Isekwe eDallas, eTexas, ke inokujongana nempendulo enzima ngokuchasa i-state executive order.
Amazwe aseMpuma Afrika aMkela iZithili ze-COVID-19 yoKhenketho ...
Inkonzo yokuqala yokuSebenza ngeenqanawa phakathi kweBoston Harbour kunye ...
ISpain ne-Saudi Arabia Jonga iNdlela eya phambili ye-UNWTO
Ukushiya iPrinta eluhlaza ngelixa useholideyini eSeychelles
Inkcitho yaseHawaii echitha kwi-US $ 1.44 yezigidigidi kodwa ngezantsi ...